Mhlawumbi, zonke iintombazana ezaziye zikhangele iikhathuni okanye zifunda iindaba zeendlovu, zaphupha ekubeni yintonga kunye nokutshata kwinduna. Amaxesha amakhonto, ewe, sele adlule, kodwa amaphupha kufuneka aguqulelwe ngokwenene. Emva kwakho konke, akukho mntu uphazamisa kwanaxa, ngosuku olubaluleke kakhulu lobomi bakhe - umhla womtshato wakhe, ukuba abe ngumthethelikazi ongaziwayo, evulelwe kwiimfihlelo zaseMpuma. Ngokukodwa ukugujwa komtshato kule ndlela kubaluleke kakhulu. IMpuma ithatha imbono eyahlukileyo yomtshato, kunokuba isentshonalanga. Umthendeleko oqhelekileyo uzaliswa ngokomoya kwaye ufumana intsingiselo yefilosofi. Imitshato yaseMpuma icatshulwa ngokufanelekileyo njengendlela yendoda eya kwenyaniso, ngokuyifumana ngokuzidela. Ukucotha nokumangalisa imimandla yaseMpuma ngeke kushiye ukungabandakanyeli nayiphi na iindwendwe ezimenyiwe. Kwaye ekusebenzeni kwayo akukho mqondo yokugcina imali kwaye uye kwi ntliziyo yokuzalwa kwesi sikolo.
Iingubo zokugqoka abantu abasanda kutshata
Nabani na umntu ngombuzo yintoni enye yeziganeko zomtshato eziphambili, ngaphandle kokungabaza, uya kuphendula - ingubo. Yaye ke, uya kulungile. Emva kwakho konke, umcimbi nje uwenza usuku lomtshato olukhethekileyo. Ikhefu ekhethekileyo yongezwa kunye nengubo yomtshato, ekulungele ukugqoka iminyaka engaphezu kweyodwa.
Ngomtshato kwindlela yaseMpumalanga, akukhathazeki ukuba yeyiphi intlobo yesambatho wena okanye umntanakho uya kuba. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukulandela ngokupheleleyo iinjongo ezisemaphandleni, ngoko kufuneka ukwazi ukuba kuya kulungele umtshakazi:
Ingubo yomtshato emhlophe
Ingubo yomtshato ebomvu
I-translucent okanye umbala wesikhafu owenziwe ngesolika ecocekileyo entloko endaweni yesigqubuthelo
Ukulungiswa kwamanani amaninzi
Kwakhona kufuneka uhlawule ingqalelo kwindlela yokwenza ubuhle baseMpumalanga. Njengekhetho, unokugxila kwamehlo amahle, ukwenza ukuzenzela kwindlela yokujonga "itekisi." Izinwele zibeke kwaye zilula: yenza nje umquba okhanyayo, oza kuguqa umthunzi omncinci.
Amadoda embukweni womtshato uya kufuna kwakhona ingubo ekhethekileyo, okuthi i-patous, ihembe elinemihlobiso yaseMpumalanga, isambatho esimhlophe, i-turban kunye ne-skullcap.
Ngelo xesha, iiOfisi zeRejista zoLuntu azange zenzeke ngokoqobo, kwaye umnqweno wokwenza konke ngendlela ekhethekileyo unokungaqondwa kakuhle. Kodwa nangomnqweno onamandla, unokuhlala ushiya imifuno eqhelekileyo yokubhalisa ngokwayo, kwaye ushiye zonke iinguqulelo kunye nefriysi yokuhlwa.
Ifom yo bhiyozo
Uhlobo olufanelekileyo kakhulu lokuqhubela umtshato wempuma kummandla wevenkile. Ngoku kukho ukhetho olukhethekileyo lwamafemu ngenkqubo yeeholide, enokuthi iguqule iholo elidabukisayo kwibhotwe lakho. Ngaphezu koko, usenokukhetha umntu oya kuxhomekeka ngokuhlwa-umphathi wezilwanyana.
Ukuba imozulu kunye nendawo yokudla ivumela, zonke iziganeko zingabanjelwa kwisitrato, umzekelo, kwintsimi yezityalo, inqanawa lehlathi okanye kummandla wonxweme, apho izithambiso ezihlotshiswe ngemihlobiso yaseMpumalanga ziya kufakwa. Iimpawu eziphambili ezenza umoya ofunekayo yi-carpet ebuninzi kunye nelayini elide, etafilini eziphantsi, ukukhanya okungahambi kakuhle, iphunga lezinto ezivumba kunye namafutha anamakha, i-hookah kwaye ngokungangabazeki inani elikhulu lemithwalo. Into ephambili kukulumkisa iindwendwe malunga nefomathi yomcimbi wokuba ubusuku bakho abuyi kuguqulwa yimvakalelo eninzi malunga neengubo zokuhlwa, izicathulo nezambatho.
Ukutya, izitya ezisuka kwimithambo kunye neenkukhu zifanelekile. Ingulube isilwanyana esingcwele phakathi kwamaSilamsi, ngoko akufanele senziwe kwitafile. Ngokuqhelekileyo, etafileni yomtshato wasempuma, ukutya kufuneka kubekho ngokubanzi. Iziqholo, iisoso, iiskese kunye neziqhamo zezidlo eziphambili kwimibhiyozo efanayo.
Kufuneka kukhunjulwe ukuba kwimimandla yaseMpuma iyakuthandwa ngokukhethekileyo. Ayinandaba nokuba kukho ukusebenza okanye ukurekhoda - into ephambili kukuba neengxolo ezithandekayo zomculo waseNdiya okanye waseArabhu, onokukwazi ukubhaptiza ngendlela enhle kunye nokulindela into enkulu kunye engavamile.
Unokucinga ngokugqithiseleyo ngomdlalo wokudanisa umdaniso, ukwenzela ukuba ngexesha lesidlo iidumbu ze-naked body of the dancers zahamba ngokukhanyisa kwamakhandlela, i-silk ecocekileyo kunye ne-velvet. Kuyafaneleka ukuthetha iingcinga, iifakir kunye ne-yogis.
Umbukiso oncomekayo ungumdaniso waseMpumalanga owenziwa ngumtshakazi. EMpuma, yonke intshukumo yomdaniso ibonisa amagama kunye neemvakalelo. Zama nje ukuxelela isikhulu sakho malunga neemvakalelo ozivelayo.
Isiphelo esifanelekileyo nesingakulibalwanga sobusuku siya kuba sisalathisi esingenakunyukelwa kwiindawo ezininzi, kunye nomboniso womlilo wangempela. Iipesele zaseMpuma, umculo, umlilo, iphunga lekhofi, isibhakabhaka sasebusuku ... Loo mini uzinikezelwe kuphela kuwe nakwakhethiweyo!
Ungakulibala njani ukutyelela
I-recipe ye-cream ice cream
Indlela yokugcina i-pepper enobutsha
Unokunyamekela njani iphakhethi?
Izandla ezisuka kwiigobolondo zaselwandle kunye namatye
Umntu onobundlobongela ngumda weephupha okanye ubusuku obubi?